शरिरको विभिन्न ठाउँमा भएका कोठीको संकेत यस्तो ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
शरिरको विभिन्न ठाउँमा भएका कोठीको संकेत यस्तो !
एजेन्सी । हाम्रो शरिरमा कुनै प्रकारको जन्मजात वा जीवनकालको क्रममा निस्किएको निशानीलाई कोठी भन्ने गर्छौं । भारतीय ज्योतिष शास्त्रको शाखा समुन्द्र विज्ञानमा शरिरमा भएको चिन्हको आधारमा व्यक्तिको भविष्यको विश्लेष गरिन्छ । शरिरमा पाएको यो निशानीले हाम्रो भविष्य र चरित्रको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ । धेरैपटक समयसँगै कोठी निस्कने गर्दछ भने कुनै गायब हुने गर्दछन् । आज हामी तपाईंलाई शरिरको कुन ठाउँको कोठीले कस्तो प्रकारको संकेत गर्दछ ।
आँखी भौंको दाहिने कोठी सुखमय र बाँयापट्टीको दुःखद दाम्पत्य जीवनको संकेत हो । दायाँ आँखीभौंमा कोठी भएका मानिसहरुको असल महिलासँग चाँडै विवाह हुन्छ । ती व्यक्ति विवाहपछि भाग्यमानी हुन्छन् । यस्ता पुरुषले आफ्नी महिलाको नाममा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ